Sekoly faharoa: mila manao ezaka ny ray aman-dreny | NewsMada
Sekoly faharoa: mila manao ezaka ny ray aman-dreny
Ny any am-pianarana, adidin’ny mpampianatra fa ny eo anivon’ny tokantrano kosa, an’ny ray aman-dreny. Mahazo tsikera mivaivay ankehitriny ny ankizy sy ny tanora malagasy. Tsy mahalala fomba, maditra, tsy mahafantatra akory ny momba azy, sns. Tsy azo lavinany fisian’ireo. Ekena, mitsoka sy tafapaka aty Madagasikara ny rivotry ny « fandrosoana » maneran-tany, kanefa, na izany aza, tsy tokony hampiova ny tena maha Malagasy izany fa tokony ho vao mainka aza hampisongadina azy.
Mitaky ezaka lehibe avy any amin’ny ray aman-dreny izany. Tsy tokony hatsipy any amin’ny mpampianatra taranja malagasy irery ny fametrahana ao am-pon’ny zaza malagasy fa Malagasy izy ary i Madagasikara no tanin-drazany. Miainga ao amin’ny ankohonana ny fanajana ireo foma amam-panao, ny kolontsaina, ny teny malagasy, sns.
Matoa tonga amin’izao toerana tsy sahaza azy izao ny « maha Malagasy », tompon’antoka lehibe amin’izany ny ray aman-dreny. Toa tsy nahavita ny adidiny amin’ny fanabeazana fa variana amin-javatra hafa. Toa fatra-panilika andraikitra amin’ny mpampianatra any an-tsekoly ihany koa anefa.
… Tsy azo hadinoina fa teo amin’ny fiarahamonina malagasy fahiny, ny ray aman-dreny no antoka voalohany nananan’ny taranany saina mandinika sy fahendrena lalina. Ary ny amin’izao, manome inona ny taranany ny ray aman-dreny?